Ram nke OnePlus 3 bụ capada iji kwado batrị ahụ | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Batrị, Noticias, OnePlus
N’izu gara aga, o juru anyị anya oddity na njikwa ebe nchekwa nke 6GB RAM nke OnePlus 3 nwere. Otu n'ime atụmatụ ya kachasị mma na nke ahụ na-amata gị na ndị ọzọ igwe, dịka ekwentị ndị nwere ọfụma nwere 4GB dịka ọkọlọtọ. Enweghị arụmọrụ nke OnePlus 3 RAM bụ n'ihi n'eziokwu na ngwanrọ ahụ kpuchiri ya, ọ bụghị n'ihi na ngwaike ahụ nwere nkwarụ, ma ugbu a anyị maara ihe kpatara nke a, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ mgbaghara nke ụlọ ọrụ ahụ mere.
Ọ bụrụ na anyị gaa na akaụntụ Twitter nke Carl Pei, onye nchoputa nke OnePlus, n'ime ya ọ na-akọwa na mkpebi ịghara iji nchekwa RAM niile bụ maka ịnye ahụmịhe onye ọrụ ka mma, ọkachasị maka smartphone erila batrị gabiga ókè. Esemokwu a sitere na vidiyo nke nwalere ọsọ ọsọ na arụmọrụ n'etiti OnePlus 3 na Samsung Galaxy S7 ihu.
Ngwaọrụ abụọ a nwere esemokwu ha na ngwaike, agbanyeghị na on-chip myirịta dị ka Snapdragon 820. Galaxy S7 ihu nwere naanị 4 GB nke Ram na ihuenyo na mkpebi QuadHD. Kama nke ahụ, ejiri One 3lus nke 6 GB nke RAM na ihuenyo nwere mkpebi HD zuru ezu. Nke pụtara na, na ohere ọzọ maka ebe nchekwa na obere pikselụ, OnePlus 3 kwesịrị iti Samsung ọnụ.
Eziokwu dị iche iche ịchọta Galaxy S7 ihu nke na-arụ ọrụ zuru oke, ebe a hụrụ OnePlus 3 ka ọ gbalịa ịbịaru S7 ihu akara. Mkpebi ikpeazụ maka njikwa nchekwa OnePlus 3 iji belata arụmọrụ ya bụ okwu nke imewe iji kwalite ndụ batrị. Nke pụtara na ọdụ a anaghị ekwe ka enwe ọtụtụ usoro na ndabere ka batrị anaghị a drunkụbiga mmanya ókè.
Pei ekwuola na ụlọ ọrụ ahụ ahapụla faịlụ ndị dị mkpa iji mepụta omenala ROM nke ahụ nwere ike iji 6GB RAM mee ihe. Echere m ma ọ bụrụ na ha etinye ebe nchekwa nke 4GB RAM nke nsogbu dị ukwuu agaghị agabiga ma ha nwedịrị ike belata ọnụahịa nke ọnụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Nchịkọta RAM dị iche iche nke OnePlus 3 bụ iji kwado ndụ batrị
Ha na-ama ọkwa 6 na 8GB ọnụ. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ajụjụ ịzụ ahịa yana ịhụ onye nwere karịa ma nye onye ọrụ ahụ echiche ụgha nke ịnwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. O na echetara m agha Megapixel, rue mgbe mmadu kwusiri wee si, rue ebea, ka anyi wulite ogo ihe ndi ozo.
Ọfọn, ọ dị ọnụ ala ị gbakwunye 2GB nke na-abaghị uru yana na tebụl ntụnyere iji merie ...
Eziokwu bụ na ọ na-esiri ike ịpụ na ọtụtụ smartphones na ha ga-achọ echiche iji gosipụta onwe ha na asọmpi ahụ. Ka o sina dị, ọ dị mma ịhapụ faịlụ ndị ahụ iji 6GB nke RAM, mana ka anyị hụ ebe ndụ batrị dị ...
VOEZ bụ ahụmịhe egwu na ahụmịhe nke anime ya gosipụtara